"Tsy manan-kenatra intsony aho!" Iza no tsy mahalala tsara an'io fehezanteny io na avy amin'ny vavan'ny vadiny, izay mijoro manoloana ny fitafiany feno toy ny isan'andro ary tsy mahalala izay hotafiana?
Fahajambana lamba - manisa blouse rehetra! - Sarotra ny misafidy
Androany, amin'ny andro rehetra, amin'ity andro manan-danja ity, izay angatahan'ny lehiben'ny departemanta aminy hanao kabary eo imason'ireo mpiasa tafavory dia tsy hitany izay mety. Mieritreritra momba ny fitambarana isan-karazany izy.
Ny blouse sy ny pataloha dia esorina amin'ny hanger ary andrana. Efa ho lany ny fotoana ary mbola tsy nahita zavatra tadiaviny amin'ity andro manandanja ity izy. Amin'ny farany dia lasa akanjo mafana maitso mahazatra sy ilay zipo volontany volontany matetika. Iza no tsy mahazatra izany?
Inona no atao hoe jamba lamba?
Ny fahajamban-damba dia indrindra amin'ny vehivavy izay, na eo aza ny safidy betsaka, dia resin'ny tsy fahatapahan-kevitry ny lamba imbetsaka isan'andro. Ny vehivavy mijoro misavoritaka manoloana ny fitafiana ary tsy mahalala tsotra akory izay hotafiana. Satria miankina amin'ny fihetseham-pony ny vehivavy amin'ny ankapobeny, izay matetika milaza amin'izy ireo fa matavy loatra izy ireo, dia sarotra be ny mahita ilay mety.
Afaka mijanona eto ve ny lahy sy ny vavy?
Ahoana no azonao anampiana? Raha fintinina, "TSY MISY INDRINDRA". Mba tsy hampidi-doza ny ady hevitra lehibe momba ny fifandraisana dia tsara kokoa ny mifehy tena amin'ny toe-javatra toy izany. Na ny teny be fitiavana indrindra aza tsy afaka manampy eto.
Amin'ny ankapobeny, ny zava-drehetra dia adika amin'ny fomba hafa noho ny iray (s) mety ho nidika. Satria raha miteny izy hoe "Heveriko fa mety aminao", dia mamaly izy hoe "lazainao foana izany" ary raha miteny izy hoe "tsy dia tiako loatra izany" dia namarana ny teniny hoe "heverinao fa matavy loatra aho amin'izany?"
Ny vehivavy izay tsy manapa-kevitra dia tokony hisafidy ilay akanjo fotsiny ny ampitso hariva mialoha. Ny tombony dia rehefa tsy misy fanerena fotoana dia manana loha mazava kokoa ianao hieritreretana ny amin'izay mety ho marina ary koa manangona fotoana sarobidy amin'ny vao maraina. Ka manomboka ny andro amin'ny toe-po tsara ianao.
Ny fomba iray hafa hamahana ny "olana" dia ny fanadiovana tsotra izao ny arimoara indray mandeha. Ny fandinihana dia mampiseho fa ny 20% -n'ny akanjo ao anaty garderobe ihany no tena mitafy tsy tapaka.
Safidy fahatelo ny rafitra antitra antsoina hoe "Akimpio ny masonao ary mandalo". Akimpio fotsiny ny masonao ary ahodino eo ambonin'ireo antontam-akanjo ny rantsan-tànanao mandra-pijanonanao tsy nahy amin'ny ampahany iray. Ary izany indrindra no mahasarika nefa tsy mieritreritra azy maharitra. Io no fomba tokana hisorohana ny ranomaso be sy ny fianjerako eo alohan'ny fitafiana miaraka amin'ny fiantsoana hoe "Tsy manan-kenatra aho!"
Tononkalo tiako sy ianao | Fitiavana tononkalo
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 18. Jolay 2021 19. Jolay 2021 Sokajy LifestyleKeywords Klamotten, kleider, fitafiana, akanjo, Jamba lamba
indray Lahatsoratra taloha: Miara-manendasa mofo
more Lahatsoratra manaraka: Fialantsasatra amin'ny fotoanan'ny Corona - nefa mitandrema!